बाजुरामा जीप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, ११ घाइते ,घाइतेलाई लैजान हेलिकोप्टर मगाइयो ! - Darpanpost
» प्रमुख समाचार अंक: 21171
बाजुरामा जीप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, ११ घाइते ,घाइतेलाई लैजान हेलिकोप्टर मगाइयो !
Darpanpost शुक्रबार, साउन ०३, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं : बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका –५ भुवाखोलामा जिप दुर्घटना भएको छ। कोल्टीको पिलुचौरबाट कालिकोटको जितेगडा जाँदै गरेको क १ ज २१ नम्मरको जिप दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परी ३ जनाको मृत्यु बाजुरका प्रहरी प्रमुख उद्धवसिंह भाटले जानकारी दिनु भयो। घटनामा ११ जना घाइते भएका छन्।जीपमा सवार १५ जना मध्ये २ जना सकुसल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप उकालोमा चढ्न नसकेर कर्णाली करिडोरको सडकबाट ५० मिटर तल खसेको बताएको छ।
ग*म्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजान हेलिकोप्टर मगाइएको छ । अन्य घाइतेको भने कोल्टी स्वास्थ्य केन्द्रमा नै उपचार भइरहेको छ ।जीप सडकबाट तल खसेको छ । कमजोर सडक संरचनाका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान भए पनि खुलिनसकेको डीएसपी उद्धवसिंह भाटले जानकारी दिए ।तस्बिर :सांकेतिक